Mareekanka oo Adkeeyay Ammaanka Suuqyada Dalkasi Cabsi Al Shabab Laga Qabo Awgeed – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Suuqyada ku yaala dalka Mareykanka ayaa waxaa la ogaaday in amaaankooda si weyn lo adkeeyay, kadib markii uu soo baxay Muuqaal muujinaya in weeraro lagu qaadayo dhismooyin Ganacsi oo ku yaala wadamada Canada England iyo Mareykanka.
Muuqalkan ayaa waxaa uu soconayaa 77 Daqiiqo waxaa soo saray xarakada Al Shabab ee Soomaaliya.
Warbixin kasoo baxday Mall of America ayaa waxaa lagu yiri “Mall of America waa uu ka war hayaa video-ga hanjabaada ah in la sii daayey oo uu waliba ka mid ahaa Xusuuso gaar ah oo ay ku jireen sawiro.
Wax kasta oo khatar ah oo ka imaan karta dhankaasi si dhab ah oo haboon ayaan uwajihi karnaa.
Waxaan u qaadaneynaa si dhab ah oo jawaabcelin ku haboon u baahan.
Qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa in la ogaan karo. Waxaan sii wadi doonaa in aan la socono xaaladdaha, oo ay la socdaan federaalka, gobolka iyo qeybta fulinta sharciga iyo heeganka waxaan ka feejiganahay had iyo jeer xaaladda. ”
Afhayeenka FBI Mareykanka wali kama uusan hadlin warkaan kasoo baxay Mall of America ee ah ka warqabida xaalada amaanka Mall-ka.
Xarakada Al Shabab ayaa bishii September ee sanadkii 2013 werar ay ku qaday xaruunta Tukaameysiga ee Westgete Mall ku dishay 60.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Madaxweyne Geele oo Maanta Gaaray Beledweyne